PixelHELPER को छाप
हामी पोजिसिबिलिटिजहरु सिफारिश गर्दछौं।
यस वेबसाइटको अपरेटर पनि मोरोक्कोको PixelHELPER इन्टरनेशनल संगठन हो।
विश्वव्यापी अपरेटिंग कलाकार सामूहिक आधिकारिक छाता संगठन द्वारा प्रतिनिधित्व गर्दछ:
इम्। इल मसौदी, रु मौरिटनी, गुइलिज
40000 माराकेच, मोरक्को
प्रबन्धक निदेशक: ओलिवर बिएनकेवस्की
क्षेत्राधिकार माराकेच, मोरक्को हो
हामी सिक्यौं। हामी खेल्छौं हामी विचारहरू विकास गर्छौं। हामी अन्धकारबाट विचारहरू प्राप्त गर्दछौँ। हामी यसको विपरीत प्रयोग गर्दछौँ। हामी यसलाई शानदार बनाउछौं, वा केहि हराउनुपर्दछ। हामी दृश्यलाई फोकस गर्छौं। हामी जडान बनाउँछौँ। हामी तपाईंको दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्छौं। हामी छायामा काम गर्छौं। हामी खोज्दै किन हल्का साथ। हामी जवाफ दिन्छौं। हामी एक खडा छौँ। हामी दोषी छौं। हामी हाम्रो भित्तामा प्रकाश को चिंगारी संग खेल्छौं। हामी उसलाई बाहिर लैजान्छौं।
र हामी भन्छौं: हामी पिक्सेलहेल्पर हो। यो हाम्रो कानूनी सूचना हो। यदि तपाईं हामीलाई मुद्दा हाल्न चाहनुहुन्छ भने, हामी मोरक्कोका एक राम्रो वकिललाई सिफारिस गर्दछौं। सबै अन्य साझेदारहरू, साथीहरू र समर्थकहरूको लागि, यो साइट मोरक्कोमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था PixelHELPER International द्वारा संचालित हो। ब्राजील, युरोप र एशियामा अन्य पिक्सेलहेल्पर समूहहरूको साथ हामी डिजिटल लाइभ स्ट्रिममा मानव अधिकार र अन्तर्क्रियात्मक आपतकालीन सहायताको लागि लड्छौं। विश्वव्यापी।
हाम्रो गतिविधि रिपोर्टमा हाम्रो बहुमूल्य कामको बारे आफूलाई विश्वस्त गर्नुहोस्। के तपाईं 55 XNUMX भन्दा बढि हुनुहुन्छ? के तपाईका आफन्तहरू तपाईका स्नायुहरूमा आउँछन्? ढिलो हुनु अघि एक इच्छाशक्ति बनाउनुहोस् र एक हिस्सा मानव अधिकारमा दान गर्नुहोस्।
तपाईंको दान को प्रत्येक यूरो संग, हामी मानवता को लागी मानवता बचाउन शानदार, दिगो कला परियोजनाहरु लागू गर्न सक्छौं। एकै साथ तपाईं अफ्रिका वा वातावरणीय परियोजनाहरूमा विकास सहायताका लागि लक्षित अनुदान दिन हाम्रो चन्दा फाराम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
साउदी अरेबियाको दूतावासमा विरोध प्रदर्शन
रुबिक क्यूबको आफ्नो विश्व भ्रमणमा पिक्सेलहेल्पर समर्थक नुसेर यासिन
PixelHELPER को छाप जुलाई 1st, 2020Oliver Bienkowski